Global Voices teny Malagasy » Nizera: Manavotra Aina Amin’ny Someso · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Mey 2017 5:20 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Nizera, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vonjy Voina
(Fanamarihana:lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2010)
Nisedra olana ara-tsakafo i Nizera,  izay nananontanona ny antsasak'ireo vahoaka 14 tapitrisa monina ao amin'ny firenena. Niantso fanampiana maika tamin'ny sehatra iraisampirenena  noho ny maha-olombelona ny Firenena Mikambana. Bilaogera iray ao amin'ny Concern US blogs , Amanda McClelland , no mitatitra momba ny fandaharanasa iray hampiasàna ny someso mba hanapariahana vola maika ho an'ireo vehivavy marefo indrindra any amin'ireo vohitra 160 ao amin'ny firenena.
Ampahanà torohay fototra :
Ampototry ny mety ho loza voajanahary i Nizera raha tsy izao dia efa mihetsika izao tontolo izao. Amin'ny maha-mpkambana ahy ao anatin'ny tarika mpanao vonjitaitran'ny Concern, tsy vahiny amin'ireny olana ireny aho: izany no antony nandefasana ahy ho aty Nizera ny 1 Janoary 2010 teo, andro roa monja talohan'ny horohorontany tao Haiti.
Ny ampemba no voly tena mbola mamelona ny ankamaroan'ny olona eto. Fambolena na fiompiana no iveloman'ny ankamaroan'ireo vahoaka 15,2 tapitrisa eto amin'ny firenena— raha tsy misy orana, tsy misy vola miditra amin'izy ireo hividianana masomboly na hambolena sakafo ampy ho hanina.
Tsy nanaraka ny fenitra ny orana tamin'ny taona lasa, fotoana tsy nisian'izy ireny mihitsy. Nahatonga fitaran'ny tsy fisian'ny vokatra izany ary 60 isanjato tamin'ny vahoaka teto amin'ny firenena ankehitriny no miatrika kere. Raha tsy misy hetsika haingana atao avy hatrany, manakaiky ny 378.000 ireo ankizy no mety ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo henjana.
Ilay famindràna vola amin'ny finday dia ampiasàna kaody iray , izay alefa amin'ny someso ho an'ireo tsirairay hahazo azy, izay azony avadika ho vola eny amin'ireo mpivarotra finday manana fifanarahana asa amin'ny tolotra fifandraisandavitra ZAIN. Ity no voalohany indrindra nampiasàna ity karazana famindràna vola amin'ny finday ity  taty amin'ny firenena afrikàna miteny ny teny Frantsay:
Efa namaly sahady ny Concern , tafiditra amin'izany ny fandaharanasa iray ampiasàna ny teknolojia finday sy ny someso mba hanapariahana vola maika ho an'ireo vehivavy marefo indrindra any amin'ireo vohitra 160. Concern koa dia nanao ” bokikely torolàlana” momba ny famindràna vola amin'ny finday ho ampahany amin'ny fialohavan-dàlana ny fiarahana mikaroka mba handraketana ny fahombiazan'ny fomba tsirairay nampiasaina.
Tena santatra io—sambany nampiasàna voalohany ny famindràna vola amin'ny finday tahaka izany toa Nizera, ary sambany nampiasàna azy tamin'ny firenena afrikàna miteny Frantsay. Misy kaody alefa amin'ny someso ho an'ny mpandray azy tsirairay avy izay azony avadika ho vola eny amin'ireo mpiaramiasa amin'ny mpanome tolotra fifandraisandavitra ZAIN miaraka amin'ilay teknolojia vaovao ZAP vao nampidirin-dry zareo hanaovana famindràna vola.
Tafiditra ao anatin'ilay fandaharanasa ny hanaovana karapanondro ho an'ireo vehivavy tsirairay mba hahamora ny fanamarinana:
Androany, nizaranay karapanondro manokana ireo vehivavy 13.000 hisitraka ilay fandaharanasanay famindràna vola amin'ny finday—tsy endrika karapanondro ofisialy hafa izy ireny. (Hotehiriziko ny tantaran'ny nakànay ireo sary 13.000 tany amin'ireo tanàna lavitra, mba ho an'ny bilaogiko manaraka!). Notolorana 20.000 cfa ihany koa ireo vehivavy tsirairay (eo amin'ny $42), izay ampy ho anà fianakaviana iray antonony hividianany sakafo mandritry ny volana iray.
Tamin-tsiky sy fisaorana no naneken'ireo vehivavy ilay karapanondro sy ny vola – saingy toa resy ry zareo, izay nampalahelo ahy. Io no mety maha-samihafa ny mihinana sy ny tsy hihinana amin'ny volana manaraka. Nihazakazaka be ny saiko: angamba tsy ampy ilay vola, angamba diso olona nokendrena izahay, angamba ny drafitra sy ny andro nodinihana teny an-databatra ka diso daholo?
Eto  ianareo afaka mahita an-tsary ny olana ara-tsakafo tao Nizera ary ny fandalinana nataon'ny IRIN , tetikasa iray an'ny Biraon'ny Firenena Mikambana Mandrindra ny Raharaha Vonjy Aina noho ny Maha-olona, momba ny resaka “hanoanana” ary raha toa ka kere ny olana ara-tsakafo misy ao Nizera . Ary raha manontany tena ianao ny amin'ny antony tsy maha-anaty lohateny vaventy an'i Nizera na misy aza io olana io, vakio ny lahatsoratray mitondra ny lohateny hoe , “Tsy toy ny sipa manaitaitra filàna ny Repoblikan'i Nizera ka tsy ampy hatao lohateny vaventy.” 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/24/100631/
 Niantso fanampiana maika tamin'ny sehatra iraisampirenena: http://www1.voanews.com/english/news/africa/west/UN-Calls-for-Urgent-Action-in-Niger-Food-Crisis-92435149.html
 torohay fototra : http://blogs.concernusa.org/2010/05/14/food-crisis-niger/#more-1118
 kere ny olana ara-tsakafo misy ao Nizera: http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=89121
 “Tsy toy ny sipa manaitaitra filàna ny Repoblikan'i Nizera ka tsy ampy hatao lohateny vaventy.”: https://globalvoicesonline.org/2010/05/05/nigers-food-crisis-aint-sexy-enough/